Sport betting-Myanmar - ibet168 အွန်လိုင်း ဘောလုံးနှင့်အားကစား
ဘောလုံးလောကနှင့် အားကစား လောင်းကြေးတွေကကော E-sport လောကမှာ ဘယ်လောက်ထိခရီးရောက်နေပြီလ?
ဘောလုံးလောင်းကစားဟူသည် ဥရောပမှ Premier League, La Liga, Serie A, Champion League ….. စသည်တို့ကို အပေါ်အသင်း နှင့် အောက်အသင်းခွဲကာ ပေါက်ကြေးအတိုင်း လောင်းကစားခြင်းဖြစ်သည်။
ပရီးမီးယားလိဂ် သည် အင်္ဂလိပ် ကြေးစားဘောလုံး ကလပ်အသင်းများ၏ အမြင့်ဆုံးလိဂ်တစ်ခု ဖြစ်သည်ဆိုတာကိုလူတိုင်းသိကြသည်။ ၎င်းသည်လည်း ယူကေ၏ အဓိကကျသော ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ တစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး ကလပ်အသင်း ၂၀ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြသည်။ ရာသီပွဲများတွင် စုစုပေါင်း ၃၈ ပွဲ ကန်ပြီး ဩဂုတ်လမှ နောက်တစ်နှစ် မေလအထိ ကျင်းပလေ့ရှိသည်။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အထိ ပရီးမီးယားရှစ်ပ်ဟု လူသိများပြီး လက်ရှိတွင် ဘာကလေစ်ဘဏ်မှ စပွန်ဆာပြုလုပ်သောကြောင့် ဘာကလေစ် ပရီးမီးယားလိဂ်ဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။
ယူအီးအက်ဖ်အေ၏လိဂ်ကိန်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များအရ La Liga သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိခုနစ်နှစ်တစ်ကြိမ်စီတွင် ဥရောပထိပ်တန်းလိဂ် နှင့်ဥရောပအားအဆင့် ၆၀ ရှိသည့်အနက် ၂၂ ခုအထိ ဦး ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
စပိန်လာလီဂါသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားကစားပြိုင်ပွဲများအနက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၂၀၁၈-၁၉ ရာသီတွင်လိဂ်ပွဲများအတွက်ပျမ်းမျှလာရောက်သူ ၂၆,၉၃၃ ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်ပြည်တွင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားကစားအသင်းတွင်မဆိုဆဌမအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်းအဖွဲ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်တွင်မဆိုတတိယအမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ သူ့ရှေ့တွင် ဘွန်ဒစ်လီဂါနှင့်ပရီးမီးယားလိဂ်က ရပ်တည်နေသည်။
ကလပ်ပေါင်း ၅၆ ခုပါဝင့်သည့်Bundesliga ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးကတည်းက ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းသည်ဘွန်ဒက်စ်လီဂါဖလားကိုအများဆုံးရရှိခဲ့ပြီး ၂၉ ကြိမ်အနိုင်ရခဲ့သည်။ သို့သော် Bundesliga သည် Borussia Dortmund၊ Hamburger SV၊ Werder Bremen၊ Borussia Mönchengladbachနှင့် VfB Stuttgart တို့နှင့်အတူအခြားချန်ပီယံများကိုလည်းတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ဘွန်ဒစ်လီဂါသည်နိုင်ငံအဆင့်ထိပ်ဆုံးလိဂ်များအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်ရာသီငါးရာသီအတွင်းဥရောပပြိုင်ပွဲများ၏ဖျော်ဖြေမှုကို အခြေခံ၍ ယူအီးအက်ဖ်အေ 2019-20 ရာသီအတွက် UEFA ၏လိဂ်ကိန်းအဆင့်အရဥရောပတွင်တတိယနေရာတွင်ရှိသည်။ ဘွန်ဒစ်လီဂါသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်နံပါတ်တစ်ဘောလုံးလိဂ်ဖြစ်ပြီးပျမ်းမျှအားကစားအားလုံးအနက် ၂၀၁၁-၁၂ ရာသီအတွင်းတစ် ဦး လျှင်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ပရိသတ် ၄၅,၁၃၄ ကြည့်ရှု့ခဲ့ကြသည်။
အမေရိကန်အမျိုးသားဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ပြီးလျှင်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်အားကစားလိဂ်တွင်မဆိုဒုတိယအများဆုံးဖြစ်သည်။ ဘွန်ဒစ်လီဂါကိုနိုင်ငံပေါင်း ၂၀၀ ကျော်မှရုပ်မြင်သံကြားမှထုတ်လွှင့်လျှက်ရှိသည်။
Bundesliga ကို ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် Dortmund တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးပထမဆုံးရာသီကို ၁၉၆၃ တွင်စတင်ခဲ့သည်။ Bundesliga ကို Deutscher Fußball-Bund (အင်္ဂလိပ် – ဂျာမန်ဘောလုံးအသင်း) ကတည်ထောင်ခဲ့သော်လည်းယခုအခါ Deutsche Fußball Liga (အင်္ဂလိပ် – ဂျာမန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်) ကတည်ထောင်ခဲ့သည်။
အီတာလီ စီးရီးအေ ဘောလုံးအမှတ်ပေးပြိုင်ပွဲသည် အီတလီနိုင်ငံအတွင်းရှိ အမှတ်ပေးဘောလုံးပြိုင်ပွဲများ၏ အဆင့်အမြင့်ဆုံးသော ပြိုင်ပွဲဖြစ်သည်။ ဥရောပချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲအတွက်လည်း ခွဲတမ်းဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည့် ထိပ်သီးပြိုင်ပွဲကြီး တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။
E-sports Betting လမ်းညွှန်
Online Betting လောကကြီးက ကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့အမျှ Professional ကျတဲ့အားကစားတိုင်းနီးပါးကို ရောက်ရှိလာနေပါပြီ။ Esports အပိုင်းကိုလဲ Bookmaker တွေစိတ်ဝင်စားလာဖို့ဆိုတာ အနှေးနဲ့အမြန်ပဲလေ။ Esports ပိုင်းကို ပုံမှန်မှန် အားကစားပွဲတွေလိုမျိုးလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှ အနည်းဆုံးတော့ အဖွဲ့၂ဖွဲ့က Arena ပုံစံမျိုး ပြိုင်ပွဲဝင်နေကြတယ်ဆိုတာကိုတော့ လက်ခံနိုင်တယ်မဟုတ်လား? ပုံမှန် Sports ပွဲစဉ်တွေနဲ့ ဘာမှလဲသိပ်ကွာခြားတာတော့မရှိပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ လောက်တုံးကတော့ Internet လိုင်းတွေမကောင်းခဲ့လို့ Esports ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ သန်းချီပြီးလုပ်ကိုင်နေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေက Esports Industry မှာပါဝင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။
လူတွေအများကြီးကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး Multiplayer video game ကတော့ Valve ကထုတ်ထားတဲ့ “Counter Strike” ပါ။
ဒါကတော့ လူငယ်တွေကြားမှာအဓိက စပြီးခေတ်စားခဲ့တာပေါ့နော်။ တခြား လူဆော့များတဲ့ Starcraft တို့ Warcraft3တို့လို့ Video Game တွေမှာလဲ ပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်တွေအမျိုးမျိုးလုပ်ခဲ့ကြပေမယ့် Counter Strike ကတော့ Professional Player တွေကို Sponsor တွေကြောင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ ရပ်တည်ပေးစေနိုင်ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး ဂိမ်းတစ်ခုပါ။
အဲ့အချိန်တုံးက Cable TV Channel တွေကလဲ ကမ္ဘာအနှံ့ကို Major/ Minor ပြိုင်ပွဲတွေ ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာလဲပါတာပေါ့။ ဒါပေမယ့်ကြာလာတော့ ဒီလိုအခကြေးငွေပေးပြီးကြည့်ရတဲ့ Channel တွေအစား Twitch လိုမျိုးအခမဲ့ Streaming Service တွေကအစားထိုးသွားခဲ့ပါတယ်။
Bookmaker တွေကဒီအပိုင်းမှာ Betting ကိုသေသေချာချာစလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာကတော့ 2006 ခုနှစ်လောက်မှာပါ။ လုံးဝမထိရသေးတဲ့ Market အသစ်ကြီးတစ်ခုကိုရှာတွေ့သွားခဲ့တာပေါ့။ ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ Online Casino တွေ၊ Betting Firm တိုင်းအလိုလိုမှာ Esports ပြိုင်ပွဲတွေကို သူတို့ရဲ့ Sport စာရင်းထဲမှာထည့်သွင်းလာခဲ့ပါပြီ။ Counter Strike အပြင်ကို DOTA (Defense of the Ancient), LOL ( League of Legends ) တို့ကတစ်ဖြေးဖြေးနာမည်ရခဲ့ပြီးတော့ ဒီနေ့ထိတိုင် Esports လောမှာ ထိပ်တန်းဝင်နေဆဲဖြစ်လာပါတယ်။